Plastic Tooling, Plastic akpụzi, Plastic Ọgwụ - Chapman
Ekwentị: + 86-0755-2826 9320
Nnukwu ihe dị iche iche
NT PRKWU AKWISKWỌ DEC MFE
Tinye na ịkpụzi na oke
LSR & UBLỌ NSỌ
Igba ogwu mmeputa
Mmepụta LSR & Rubber
Mmadụ Bịa ka ụlọ ọrụ Chapman Maker, E hiwere ya na 2008. Anyị nwere asambodo SGS na sistemụ njikwa mma 90000 ISO.
Anyị na-elekwasị anya na plastik ịkpụzi mmepe; mkpa na oké mgbidi ịkpụzi, uko ndidi ịkpụzi, LSR ịkpụzi, ọhụrụ ngwaahịa mmepe na nzukọ. Anyị na-eje ozi n'ọtụtụ ahịa gụnyere Industrial, Automotive, Medical, Electronics, Defense, ationgbọ njem na ndị ahịa. Anyị na-agabiga ihe ndị ahịa anyị na-atụ anya site na inye ndị niile anyị na ha na-akpa ike na ịmepụta ọdịbendị nke na-agbakwụnye mmelite, nrụpụta na-arụ ọrụ na ntinye aka iji hụ na ndị ahịa anyị bara uru.
80 Ndi mmadu
-30bọchị 5-30 Etiti oge
Ọnwa 300-500K Ọgwụ ikike
35-50 etstọ / ọnwa Ebu ikike
Fan azụ mkpuchi
34 na 4 pin njikọ
Ngwa ihe atụ
Na PCBA efere ugwu akụkụ
Plastic akpụzi & Ọgwụ
Moldlọ ọrụ anyị na-akpụzi na-enye mgbanwe na-agba ụdị niile nke ihe thermoplastic. Anyị ipuiche n'ichepụta ngwaahịa maka ọtụtụ ngwa yana maka ụlọ ọrụ akọwapụtara gụnyere ọgwụ, ngwa elektrọnik, njikọta, ụlọ ọrụ mmepụta ihe, nchekwa, njem, na ndị ahịa.
Site na osisi anọ na 50 + ogwu sitere na 60 ruo 500 tọn, anyị nwere ike ịmepụta ihe ndị dị obere dị ka .75 ounce ruo ogige ndị buru ibu dị ka ounces 80 (5 lbs). Anyị nwere ike inyere gị aka na optimizing na mma gị ngwaahịa imewe iji nweta ihe kacha mma ga-esi na-ezute gị akụrụngwa chọrọ.
Ihe ọ bụla ogbo ị na-na n'oge ngwaahịa mmepe anyị otu dị njikere inyere na-atụ aro maka gị aghụghọ iji belata ịkpụzi na abụọ ọrụ na-akwụ ụgwọ.
Nzube maka Nrụpụta ihe
Vertically Integrated n'ichepụta
Oké na mkpa Wall Nkedo
Cochọ mma & Nyocha
Kpoo ihe niile
Ọrụ anyị na-arụ n'ụlọ na-ewepụ ndị na-ere ahịa n'èzí, na-echekwa oge dị mkpa na-eduga na ọnụ ahịa maka ngwaahịa gị niile.
-Lọ Secondary Operations:
Akụkụ Na-esonye: Njikọ nrapado, Ọkụ Ọkụ
Ultrasonic ịgbado ọkụ
Kedo akwa Obibi na cochọ Mma
Mgbakọ na igwe na elektrọnik na ule
ShenZhen Office: Nke 1113, Hengping Dong Road, Yuanshan Street, Longgang District, Shenzhen City, Guangdong Province, China.
Nmeputa ohuru ohuru na COVID-19
COVID-19 Ọ bụ ezie na ọ dị egwu, oge nsogbu ...
Ndị na-akpụzi akpụzi na-elekwasị anya na ịchọta ihe ọzọ ...
Dika otutu ahia ahia ndi ozo ...
LSR mmiri mmiri silicone ebu ngwa
A na-edebiri gel silica gel dị ka LSR, ...